China SUS304 yekumhanyisa 14 musoro multihead weigher fekitori uye vagadziri | Smart Weigh
Iyo 14 misoro yakawanda yehuremu inorema kushandiswa kana ichienzaniswa ne gumi yemusoro misoro yakawanda. Iyo inokodzera kumhanya kwakanyanya kana kwepamusoro sorojekiti, senge 60-100 mabhegi / min snacks kurongedza chirongwa.
Hopper Vhoriyamu: 1.6L / 2.5L
120 mabhegi / min
7 ”kana gumi” bata kumeso
Iyo 14 misoro yakawanda yehuremu inorema kushandiswa kana ichienzaniswa ne gumi yemusoro misoro yakawanda. Iyo yakakodzera kumhanyisa kwakanyanya kana kwakanyanya mapurojekiti, akadai se 60-100 mabhegi / min snacks kurongedza mapurojekiti.
• Iine pamusoro pezviuru gumi nezvitanhatu zvehuremu hwakabatana hwechokwadi hwakanyanya.
• Modular board control system, Smart Weigher's modular board iri rairo kune ese mamodheru, ari nyore ekugadzirisa.
• 1.6L kana 2.5L hopper yeakasiyana chigadzirwa huremu uye vhoriyamu.
Smart Weigh inopa yakasarudzika 3D maonero (iyo yechina maonero pazasi). Unogona kutarisa muchina kumberi, parutivi, kumusoro uye nekuona kwese nehukuru. Izvo zvakajeka kuziva saizi yemashini uye kusarudza kuti ungaisa sei uremu mufekitori yako.
Zvadaro: SUS304 musanganiswa 24 misoro yakawanda kurema
14 musoro weigher